Etu ị ga-esi jigide ọla ịchọ mma ọla edo ma ọ daa?
1. Ọ bụrụ na eyighị ọla edo ahụ etinyere ogologo oge, a ga-ehichapụ ya na akwa dị nro iji zere nsị ọsụsọ na ọla ahụ ma mee ka mbibi, wee tinye ya na akpa ma ọ bụ igbe akara iji kewaa ikuku iji gbochie ọla ịchọ mma na ịpị edo edo na oji. 2. Emela ...
Ihe ọla ndị ahụ a kpụrụ ọla edo ga-adalata?
Ihe ịchọ mma ọla edo bụ ihe ịchọ mma a na-ahụkarị. Ma ọ na-abụkarị ma ọ bụ na ememme ndị dị mkpa, ndị mmadụ ga-eyi ọla ịchọ mma n’elu ha. Site na agba nke ejiri ọla edo mee, ha na-egosikwa na ọ na-egbu maramara. Mgbe anyị na-agakarị ụlọ ahịa ọla mma zụta ngwaahịa ndị a na-ete ọla edo, anyị ...
M ka nwere ndị a ikpeazụ ole na ole cuban urukurubụba olu na cz ọla ntị tent maka girl zuru okè maka a inepo onyinye ọnụ ọnụ N'ogbe zuru ezu stocked kasị ala MOQ Kasị Mbupu Isi metal: ọla Plated ihe: Rhodium na 18K gold Isi nkume: 5A zirconia (cz nkume Characteri ...
Butterfly Tenis Chain, Butterfly Ihe eji eme ihe, Chain Chains, Tennis Chain Olu, Ahụ ọla, Olu ọlaọcha,